I-FlashLED V16, ukhuseleko olungakumbi kunye nentuthuzelo engakumbi [Uphononongo] | Izixhobo zeNdaba
UMiguel Hernandez | 22/05/2022 10:00 | ngokubanzi, Reviews
Njengoko abaninzi benu besazi, ukususela ngoFebruwari ophelileyo eSpeyin, kunokwenzeka ukubuyisela oonxantathu abadala ababonakalisiweyo kunye ne-V16 entsha yeebhakhoni ze-LED eziqinisekisiweyo, iinkqubo zokukhanyisa eziza kusebenza okwethutyana njengenguqu phakathi konxantathu okhankanywe ngasentla kunye neebhanoni ze-geolocated zexesha elizayo eziza kunceda endleleni. amangenelo oncedo ngabasemagunyeni.
Ngaba iibhikhoni ze-V16 zezona zikhuselekileyo kunonxantathu besintu? Sivavanye i-FlashLED V16 beacon, enye yeempawu zoovulindlela ekusasazweni kolu hlobo lwemveliso eSpain, ukubona ukuba ngaba kufanelekile ukuzisebenzisa.
Le modeli yohlobo lweFlashLED iza kuyilo olumilise okwentyatyambo, eyenziwe ngeplastiki e-orenji ye-ABS. Iphakheji ibandakanya ukongeza kwi-padded case ephetheyo, ibhetri ye-9V malunga nexesha leenyanga ezingama-36.
Ukunikezelwa kokulungelelaniswa kwee-LED zayo, le bhakana Inokubonakala kwe-360-degree kunye noluhlu oluya kuthi ga kwi-1 yeekhilomitha, ngaloo ndlela ihlangabezana neemfuno eziyimfuneko ukuze iqinisekiswe yi-DGT njengesixhobo se-V16, oko kukuthi, ivunyiwe ukuba isetyenziswe endaweni yoonxantathu bemveli.
1 Isohlwayo sokungasebenzisi kakuhle oonxantathu
2 Ukusetyenziswa kwebhakhoni yeV16 FlashLED
Isohlwayo sokungasebenzisi kakuhle oonxantathu
Akukhona nje ukuba kunyanzelekile ukuba babe nonxantathu kunye neyona nto ibalulekileyo ebonisa i-vest, kufuneka babe ne-E11 isatifikethi se-European Union ngokubhekiselele kuyilo kunye nokubonakala. Nangona kunjalo, abanxantathu basesiqwini kwaye abayi kuzibeka ngokwabo.
NgokweSiqendu 130 seMimiselo ye-General Circulation Regulations, oonxantathu kufuneka babekwe kwiimitha ezingama-50 ukusuka kumqobo kwaye kufuneka babonakale ubuncinane kwi-100 yeemitha kude. Ukungazibeki kakuhle okanye ukungazifumani kuya kukhokelela kwisohlwayo esifikelela kuma-200 eeuro.
Indlela "esisidenge" kakhulu yokuphinda ukungonwabi kwengozi okanye ukwaphuka ngesohlwayo solawulo.
Ukusetyenziswa kwebhakhoni yeV16 FlashLED
Ukususela nge-1 kaJulayi, 2021 kunokwenzeka ukusebenzisa ezi bhakana V16 ukubuyisela oonxantathu ababonisayo.
Imodeli esetyenzisiweyo kuhlalutyo, njengoko besitshilo, Ukubonakala kwe-360 degree ukuya kumgama weekhilomitha, Kule nto, isebenzisa ibhetri ye-9V ehlala ukuya kwiinyanga ezingama-36 ngaphandle kokusetyenziswa, okanye ubuncinane iiyure ezintathu zokukhanya okuqhubekayo.
Kwimeko yeFlashLED siyifumene kulula ukuyisebenzisa kuba ngaphandle kwento yokuba ineqhosha lokuyivula, inomazibuthe omncinci oncamathela ibhakana eluphahleni lwemoto yethu, kwaye ngenxa yokwalekwa kwayo zerabha ithintela imikrwelo engafunekiyo kwipeyinti yayo.
Nangona singazazi iziqinisekiso ngokuthe ngqo bayakwazi ukumelana namanzi nothuli; into eqondakalayo xa ucinga ukuba ziyilelwe ukukhangela ingozi okanye ukonakala, yaye ezi ziluncedo ngakumbi ngeentsuku zemvula.
Ungayibeka ngaphakathi emotweni ngaphandle kokususa ibhanti lakho
Yehlisa umngcipheko wokugilwa
Bonisa ngokuchanekileyo iingozi kunye nokwaphuka
Ukongeza, iFlashLED ibonisa ukuba le mveliso yakhiwe I-FlashLED inenkqubo yokukhanyisa ngokukhanya okumhlophe xa sifuna okanye kufuneka sisebenzise ibhakana njengetotshi ukuze siyisebenzise ngaphakathi kwinqwelo-mafutha okanye ukusombulula ingxaki eyenzeka manqaphanqapha.
Umqhubi, ngaphandle kokuphuma kwisithuthi okanye asuse ibhanti lesitulo, unokubeka ukukhanya okungxamisekileyo kweV16 enkosi kwisiseko sayo esinemagnethi.
Emva kweemvavanyo zethu siye safikelela kwisigqibo sokuba olu hlobo lwebhakana, nangona lunayo "umhla wokuphelelwa yisikhathi" ngenxa yokuba iibhakoni ze-geolocated ziqala ukusebenza ngo-2026 ngokutsho kwe-DGT, ziya kuba negalelo ngexesha lokusetyenziswa ukuba sinikeze okongeziweyo. ukhuseleko kunye nentuthuzelo, kwakhona kusivumela ukuba sigcine indawo eninzi sithathela ingqalelo imilinganiselo yayo encitshisiweyo xa kuthelekiswa noonxantathu abaqhelekileyo. Ngamafutshane, ukhetho olunomdla oluqwalasela ukuba banokuthengwa kuyo website yayo esemthethweni ukusuka 9,99 euro. Bakwamkele iindlela ezahlukeneyo zokuhlawula njengeApple Pay.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Iindaba zeGajethi » ngokubanzi » I-FlashLED V16, ukhuseleko ngakumbi kunye nentuthuzelo ngakumbi [Jonga]
Ubonakala njani kwimephu zikaGoogle